လေရဟတ်ဖြင့်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃
လွန်ခဲ့သော ၃၀နှစ်က ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ဝင်း (အင်းစိန်) မှာ လျှပ်စစ်၊အီလက်ထရွန်းနစ်ဆရာကြီး ဦးခိုင်ဦးက လေအားလျှပ်စစ် ပရိုဂျက်တခုလုပ်နေတာကို ၀င်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လေအားကောင်ရင် ၅ကီလိုဝပ်လောက် ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သုတေသနလုပ်ပြီး ပြန်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ လက်တွေ့လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ်မကိုက်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေအားလျှပ်စစ် မထွန်းကားတာ အခု ၂၀၁၃အထိပါပဲ။ အမေရိကန်ပြည် ကာလီဖိုးနီးယားမှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာများစွာကတော့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနဲ့လော့အိန်ဂျယ်မြို့၂ခု ကားနဲ့ မိုင်၃၀၀လောက် ကားမောင်းသွားရင်၊ လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာ လေရဟတ်အမြောက်အများ တွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစားလေရဟတ်များဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု ၂၀၁၁ မှာ ကျောက်မီးသွေး (၄၁%)၊ ရေအား (၁၆%)၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ (၂၁%)၊ ညူကလီယား (၁၃%)၊ လောင်စာဆီ၊ဒီဇယ် (၅.၅%) နဲ့ လေရဟတ် (၁.၁%) ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုပေါင်း 219 Twh နဲ့ အဆင့် ၆မှာရှိပါတယ်။ နေရောင်ခြည်အားက ၀.၀၆% (12 Twh) ပဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေရဟတ်နည်းပညာက နေရောင်ခြည်ထက် ပိုပြီးလက်တွေ့ဆန်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိတဲ့ Alternate Energy ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လေအားလျှပ်စစ်၊ နေရောင်ခြည်အားလျှပ်စစ် ဆိုတာ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံများက ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ငွေကြေးအကုန်ကျခံပြီး၊ အစိုးရ ပိုက်ဆံနဲ့လုပ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလွန်ကြီးမားလှတဲ့ လေအားတာဘိုင်ကြီးတွေဆို တစ်လုံးကို ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ တန်ပါတယ်။ အသေးစားလေးတွေပဲ ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံများက လက်တွေ့သုံးကြပါတယ်။
Wind turbine components : 1-Foundation, 2-Connection to the electric grid, 3-Tower, 4-Access ladder, 5-Wind orientation control (Yaw control), 6-Nacelle, 7-Generator, 8-Anemometer, 9-Electric or Machanical Brake, 10-Gearbox, 11-Rotor blade, 12-Blade pitch control, 13-Rotor hub.
လေရဟတ်များကို Class I to IV သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ လေပွေတိုက်ခတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ စီးပွားဖြစ် အကြီးစားလေရဟတ်များ Class III အထက်ဖြစ်ပါတယ်။ လေတိုက်နှုန်းဟာ မြေပြင်မှာ နည်းပါးတာကြောင့် လေတိုက်နှုန်းမြင့်တဲ့ မီတာ၁၀၀အမြင့်ထိအောာင် ဆောက်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများစွာ ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဧရာမ လေရဟတ်လျှပ်စစ်တာဘိုင် နည်းပညာပေါ်ထွက်လာရပါတယ်။ ပထမဆုံး မဂါဝပ်ထွက်တဲ့ လေရဟတ်တာဘိုင်ကို အမေရိကန်၊ Vermont, USA မှာ ၁၉၄၁က စတင်ခဲ့ပါတယ်။ တာဘိုင်ဘလိတ်ဟာ မီတာ ၄၀မှာ ၉၀အထိ စက်ဝိုင်းအကျယ်ရပါတယ်။ လေရဟတ်ကြီးများဟာ မီတာ၁၀၀ကျော်ထိ မြင့်မားပါတယ်။ အထပ်၄၀ကျော်တိုက်ကြီးထက် ပိုမြင့်တဲ့ ဧရာမတာဘိုင်ကြီးများဟာ၊ တစ်ခုကို လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၅၀၀ကီလိုဝပ် – ၂၀၀၀ကီလိုဝပ် (50 kW to2mW) အထိထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အကြီးဆုံးတာဘိုင်ကတော့ ၇.၅မဂါဝပ် Enercon E-126 ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဘိုးကတော့ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ တန်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်အတွက် လေရဟတ်တာဘိုင် ၀ယ်ပြီးတပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိပါတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ လေရဟတ်တာဘိုင်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံရဲ့ ၅% (13 Twh) သုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ နေရောင်ခြည်လျှပ်စစ်က တွက်သားမကိုက်လို့ မသုံးကြပါဘူး။ ဥပမာ ဒေါ်လာ၂သိန်းတန်တဲ့ 100kw လေရဟတ်တာဘိုင်တစ်ခု ၀ယ်တပ်မယ်ဆိုရင် တွက်သားကိုက်မလား။ Alibaba.com မှာရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ 100kw Cummings Engine တစ်လုံးမှ ဒေါ်လာ၆သောင်းလောက်ပဲ ကျသင့်ပါတယ်။ လေရဟတ်က ဈေးကြီးပေမဲ့ နှစ်၄၀လောက် လောင်စာဆီမလိုပဲသုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့ ရေရှည်မှာ တွက်သားကိုက်ပါတယ်။
လေတိုက်နှုန်းက 40 m/s (144 km/h, 89 MPH) to 72 m/s (259 km/h, 161 MPH) ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် 60 m/s လေတိုက်နှုန်းရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထိန်ချုပ်၊ ထုတ်လုပ်နည်း (၃)မျိုးရှိပါတယ်။ ဘလိတ်လည်ပတ်နှုန်းဟာ လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီး 10 to 22 rpm ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပါတယ်။ Horizontal & Vertical Tower ဒီဇိုင်း၂မျိုးရှိပါတယ်။ Horizontal နည်းမှာ ဂျနရေတာနဲ့ဂီယာဘောက်စ် တာဝါတိုင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ ထားရပါတယ်။ အများဆုံးသုံးကြပါတယ်။ Vertical နည်းမှာတော့ ဂျနရေတာနဲ့ဂီယာဘောက်စ် အောက်ဆုံး၊မြေပေါ်မှာပဲ ထားနိုင်ပါတယ်။ Vertical နည်းမှာ Low Starting Torque, Dynamic Stability problems တွေရှိပါတယ်။
လေတိုက်နှုန်း အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး၊ လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ ဂီယာဘောက်စ်သုံးပါတယ်။ ဒိန်းမတ်သုတေသီများက ဂီယာဘောက်စ် သုံးရင် သံလိုက်ပိုသုံးရလို့၊ ဂီယာဘောက်မပါတဲ့ တာဘိုင်များကိုထုတ်လာပါတယ်။ သံလိုက်ဓါတ်အတွက် သုံးတဲ့ Neodymium Magnet ကုန်ကြမ်းများစွာထုတ်နိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာကတော့ ဂျပန် ဟစ်တာချီကုမ္မဏီက သံလိုက်မူပိုင်ခွင့်များစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
လေတိုက်နှုန်း အရမ်းမြင့်နေရင် ဘရိတ်အုပ်တဲ့စနစ်ကိုသုံးရပါတယ်။ တာဘိုင်တွေ ပျက်စီးမှာကို ကာကွယ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) စက်မှုဘရိတ် စနစ်ကိုသုံးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြီးများဟာ အမေရိကားမှာ အလွန်များတဲ့အတွက် တိုင်ဖုန်းခံနိုင်တဲ့ စနစ်ဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ရပါတယ်။
ဘလိတ်ပြား ၃ခု ဒီဇိုင်းကို အများဆုံးသုံးကြပါတယ်။ ယခင်က လေးလံ၊ခိုင်ခံတဲ့ သံမဏိများကို သုံးကြသော်လည်း၊ အခုခေတ်မှာ အလူမီနီယံ၊ ပေါင်းစပ်သတ္တုများကို အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဘလိတ်ဒီဇိုင်းမှာ သုံးပါတယ်။ Material အသုံးပြုတဲ့ သတ္တုဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းပညာအထူးလိုအပ်ပါတယ်။ လေတိုက်နှုန်း အလွန်မြင့်ချိန် (မုန်တိုင်းဒါဏ်) ခံနိုင်ဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ တခါတရံ လေရဟတ်လုံးဝရပ်သွားဖို့လည်း ဒီဇိုင်းလုပ်ရပါတယ်။ လေကြောင်း၊ လေယာဉ်တောင်ပံ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ချမ်းသာတဲ့ ကမ်းလွန်ရေနံကုမ္မဏီကြီးများအတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို လေရဟတ်တာဘိုင်က စိတ်ချစွာရယူဖို့ ၊ လေရဟတ်တာဘိုင် ထုတ်လုပ်သူများက အထူးကြိုးစား၊သုတေသနပြုနေပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ချရမလဲဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကမ်းလွန်ရေနံတွင်းများအတွက် ရေပေါ်တဲ့ပလက်ဖေါင်းကို Floating Tower သုံးပါတယ်။
♦ လေရဟတ်တာဗိုင် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ပိုင်စီးမှု
တရုပ်ပြည်က Sinovel, Goldwind, Guodian, Ming Yang ၄ခု၊ ဒိန်းမတ်၊ဂျာမဏီနိုင်ငံက Vestas, Enercon, Siemens ၃ခု၊ စပိန် Gamesa, အမေရိကန် GE Energy, အိန္နိယ Suzion Group တစ်ခုစီက ကမ္ဘာ့လေရဟတ်တာဘိုင်ဈေးကွက်ကို ကြီးစိုးထားပါတယ်။ (ဇယား ၂၀၁၁)။ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ တာဝါတိုင်း ၂၂%၊ ဘလိတ်ပြား ၁၈%၊ ဂီယာဘောက်စ် ၁၄%၊ ဂျနရေတာ ၈% ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း၂၀အတွင်း ဂျာမန်၊အမေရိကန် နည်းပညာများကို ရယူပြီး၊ ဧရာမတာဘိုင်ဈေးကွက်ကို တရုပ်ကုမ္မဏီလေးခုက ၃၀%လောက် ယူသွားတာ အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်ကုမ္မဏီကြီးများက R&D Research and Development အင်ဂျင်နီယာများကို ငွေအထူးသုံးစွဲနေပါပြီ။ အမေရိကား၊ ဥရောပတွေကို ပြိုင်နိုင်ရုံသာမက အနိုင်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လိုက်မမှီနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။
♦ နည်းပညာ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများ Operation အဆင့်သာရှိသေး
အဆင့်နိုမ့်ကြောင်း လက်တွေ့နည်းပါးကြောင်း၊ အမှန်အတိုင်းပြောပေမဲ့ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါ။ လေရဟတ်နည်းပညာအကြောင်း မြန်မာပညာရှင်များ မနိုင်သေးကြောင်း သိပါတယ်။ သို့သော် ရွှေမြန်မာအစိုးရများက ဘုမသိ၊ ဘမသိနဲ့ လုပ်ရင်ရမယ်ထင်ပြီး လုပ်ခိုင်း၊ MOU လက်မှတ်ထိုးနေတာ တိုင်းပြည်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်မဲ့ ပညာရှင်များလိုနေပါတယ်။ ဓါတ်အားထုတ်စက်များနဲ့ ပတ်သက်ရင် … နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကြက်ဆူဆီဓါတ်အားစက်ရုံအဆုံး.. ကမ္ဘာကမလုပ်သေးတာတွေ ရွှေဗမာဟေ့ ဆိုပြီး ယောင်လို့မှ မလုပ်မိဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ တရုပ်၊ ဗီယက်နမ်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလအတွင် ပိုက်ဘောမိခြင်း (တဖက်နိုင်ငံမှ တွက်သားမကိုက်သော စက်အသစ်များကို လာရောင်းချခြင်း) တွေ အများအပြားခံခဲ့ရပါတယ်။ လေရဟတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ရင်လည်း ပုဂ္ဂလိကပဲ ထုတ်ပါစေ။ အစိုးရက ဓါတ်အားပေးစက် အကြီးစားများ ဥပမာ ၁၀မဂ္ဂာဝပ်အထက် လာဆောက်မယ်ဆိုရင် သတိအများကြီးထားရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နောင်၁၀နှစ်အထက် ကြာတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ဟာ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်ထက် ဆိုးတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်လျှပ်စစ်ဈေးလို ခရိုနီများနဲ့ ပူးပေါင်း၊ ပိုက်ဘောမိနေတဲ့ ဖက်စပ်ဓါတ်အား ဈေးအလွန်ကြီးသွားနိုင်လို့ပါ။ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား ၁၉၉၀နောက်ပိုင်း ဆူဟာတို၊ မားကို့စ် ခေတ်ကာလ ဖက်စပ် ခရိုနီများရဲ့ အကြံအဖန်လုပ်မှုကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်ဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ လျှပ်စစ်ဈေးအကြီးဆုံး (တစ်ယူနစ် ၄၀ဆင့်) အထိ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ၊ နဲ့ မြန်မာပညာရှင်များ သတိကြီးစွာ ဆုံးဖြတ်နေခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်၊ ကိုးရီးယားတို့ရဲ့ လျှပ်စစ် မဟာရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများဟာ စိတ်ချရပါတယ်။ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ တရုပ်နိုင်ငံများက လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီများရဲ့ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများမှာ လှည့်ကွက်များစွာရှိပါတယ်။ အသေးစား ဓါတ်အပေးစက်များ အားပေးချင်ရင်တော့ ပထမဆုံး ဓါတ်အားပေးစက် သွင်းကုန် (အခွန်မကောက်ပဲ) တင်သွင်းခွင့်ပြုရပါမယ်။ လောလောဆယ်တော့ စက်ဆိုရင် ဘာစက်ပဲဖြစ်ပစေ၊ ကောက်ရိတ်စက်၊ ဓါတ်ဆီမသုံးတဲ့ စက်များကိုတောင် အခွန်ကောက်၊ လာဘ်စားနေတဲ့ အခွန်စနစ်ကြီးရဲ့ ကြိုးနီ (မသိနားမလည်ခြင်း) ရှိနေဆဲပါပဲ။ မြန်မာပြည်ထုတ် ပစ္စည်းများဟာ ဖိလစ်ပိုင်ထုတ် ပစ္စည်းများလို ဈေးကြီးနေသရွေ့၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ မလုပ်နိုင်ပဲ ဆင်းရဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Turbine Blade , transportation to 5MW Wind Turbine installation
♦ Ming Yang Win Power Group
တရုပ်နိုင်ငံမှာ နံပါတ်၎အဆင့်ရှိပြီး၊ ကမ္ဘာ့ နံပါတ်(၁၀) အဆင့်ရှိတဲ့ Ming Yang Wind Power Group ကိုစတင်ခဲ့တဲ့ Zhang Chuanwei အကြောင်း တမျက်နှာ ဇတ်လမ်းတိုလေးဖြစ်ပါတယ်။
Gushi, Henan ပြည်နယ်မှ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၀နှစ်ခန့် စစ်မှုထမ်းပြီး ၁၉၉၃တွင် ကုမ္ပဏီထောင်သည်။ ၁၉၉၃တွင် Shongshan Ming Yang Electric လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း အဓိကထားခဲ့သည်။
၂၀၀၅တွင် လေစွမ်းအင်တာဘိုင်ကြီးများ Wind Turbine ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီပြပွဲကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသို့ ၀င်ရောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားဒီဇိုင်းကိုသုံးပြီး ပြည်တွင်းတွင် Wind Turbine များထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူ၏ လျှပ်စစ်ထိန်းသိမ်းမှုပညာ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သူလုပ်မည့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန် ယုံကြည်မှုရှိသည်။
သူ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များက သူတို့ကုမ္ပဏီအငယ်စားမှ Wind Turbine ကြီးများထုတ်လုပ်ရန် သဘောမတူကြ။ သို့သော် Zhang က လက်မလျှော့ပါ။ နောက်တစ်နှစ်တွင် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ Guangdong Ming Yang Wind Power Technology ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။
Zhang ပထမဆုံးအလုပ်မှာ တာဘိုင်ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာရယူရေးဖြစ်သည်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ Aerodyn ကုမ္ပဏီနှင့် စာချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးပေါင်းပြီး ဒီဇိုင်းအသစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီမှာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ Research & Development ကို လုပ်ဆောင်ပြီး၊ တရုပ်ကုမ္ပဏီက နမူနာစက် Prototype ထုတ်လုပ်ပြီး၊ တရုပ်ပြည်တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ သိပ်စိတ်မပါသော်လည်း တရုပ်ပညာရှင်များ အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ပြသမှုများဖြင့် ဂျာမန်များပါဝင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၇သြဂုတ်လတွင် Ming Yang ကုမ္ပဏီမှာ ပထမဆုံး လေမုန်တိုင်းအကြမ်းခံ 1.5 mW လေတာဘိုင်ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆင့်၁၀ရှိသော တိုင်းဖုန်းမုန်တိုင်းကြီး၂ခုကို ခံနိုင်ကြောင်း လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးများမှ အမှာစာ ၇၂ခု (ကန်ဒေါ်လာ ၁၀၉သန်း) ရရှိပြီး စာချုပ်ချု့ပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
Zhang သည် တာဘိုင်အငှားလုပ်ငန်းကိုလည်း တရုပ်ဘဏ်ကြီးတစ်ခု ICBC ဖြင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘဏ်က Ming Yang တာဘိုင်များကို ၀ယ်ယူပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သူများကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၉တွင် Ming Yang ကုမ္ပဏီတစ်နှစ်ဝင်ငွေ၏ ၃၀% သည် တာဘိုင်ငှားရမ်းသည့် လုပ်ငန်းမှ ရရှိခဲ့သည်။
Ming Yang နည်းဗျူဟာမှာ ကမ်းလွန်ရေနံ တာဘိုင်များကို ဦးတည်ရန်ဖြစ်သည်။ ကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ငန်း တာဘိုင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊ ဂရစ်နည်းပညာများနှင့် ဆက်စပ်အကျိုးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ ကမ်းလွန်ရေနံတွင်းများအတွက် Wind Turbine ဈေးကွက်တွင် ဦးဆောင်မှုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀တွင် အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်တွင် ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၃၅၀ဖြင့် စာရင်းသွင်းပြီးဖြစ်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှု – ကန်ဒေါ်လာ ၃၆၅သန်း၊ Rank ??? on Huran Rich List 2011.